5 Kasị Ike Pokémon Na Pokémon GO Nke a 2021 ❤️ GOLUEGO.COM
Mọnde, Ọktọba 18, 2021
Ise kacha ike Pokémon na Pokémon GO nke a 2021
emelitere ikpeazụ Ọnwa Mbụ 20, 2021
Ike pokémon na Pokémon GO kpebisiri ike site na CPs, ma ọ bụ Igha Ike, nke putara Combat Power na bekee. Otú ọ dị, na mgbakwunye na nke a enwere ihe ndị ọzọ dị ka ngwakọta ha nke ụdị, ike na adịghị ike ha.
N’iburu nke ahụ n’uche, anyị kpebiri iwetara gị nke kachasị elu 5 kacha elu Pokémon GO, yabụ na ị na-agba ọsọ iji zụọ nnukwu anụ ahụ edepụtara iji hụ mmeri gị na esemokwu gị niile.
Top 5 kacha ike na Pokémon GO
Pokémon a na-akọ akụkọ si Teseleia bụ nke na-ebido elu a. Electricdị eletriki / Dragọn ya na-eme ka ọ ghara iguzogide Nchara, Mmiri, Ahịhịa, Iberibe, Ọkụ na ọkụ eletrik.
Agbanyeghị, ọ bụ adịghị ike megide Ice, Dragọn, Fairy, na ụdị ụwa Pokémon.
Attackwakpo Charge Beam na Wild Charge na-enye DPS ọgụ kachasị elu, ebe usoro kachasị mma nke nchebe bụ Iwe.
Okdị Pokémon a na-akọ akụkọ mgbe ochie nwere ike ibibi ọtụtụ ihe ma nwee Tail Tail na Ala Ọma Jijiji dị ka akụkụ nke usoro ịkwaga ya.
Anyanwụ doo bụkwa akụkụ nke usoro ngagharị ya.
Ọ na-eguzogide Rock, Poison, na Electric-ụdị Pokémon, mana ọ na-adị mfe ụdị Grass, Ice, na Water-types.
Slaking bụ Pokémon ọzọ na n’enweghị akụkọ ọdịnala, a na-ahụ ọtụtụ ihe na-echebe gyms na egwuregwu ahụ.
O nwere Ala Ọmajiji, nke siri ike megide ụdị Ọkụ, Nchara, Okwute, nsi, na ọkụ eletrik.
Metagross bụ Pokémon kachasị mma nke ụdị nchara na nke kachasị mma nke ụdị Psychic na-enweghị ịgụta ndị a ma ama.
Mbugharị ya, Meteor Mash bụ ihe ịrụ ụka adịghị ya na ọ bụ otu nchara kacha mma n’egwuregwu ahụ.
Ọ bụ ezie na ọ na-enweghị ike ịnwe mwakpo Ọkụ, attackswa, Ghost na Ọchịchịrị, ọ nwere nnukwu mbibi na ọ na-adịgide adịgide. Nke a bụ otu n'ime ihe mere Pokémon nwere ike ịchọta ebe nchekwa na Pokémon GO.
Ma, n'ezie, pokémon kachasị mma na egwuregwu ahụ, yana CP nwere ike ịgafe akara 4000.
Mewtwo nwere oke mbibi ketara eketa dị ka Psystrike.
Ihe na - eme ka ọ bụrụ Pokémon kachasị mma bụ na ọbụlagodi na nnọpụiche ndị na - anọpụ iche, ndị na - azụ ọzụzụ nwere aka Mewtwo. Ọbụna na-enweghị mmegharị eketa, Psychic na Focus Blast nwere ike ibibi ọtụtụ Pokémon.
Dọkịta Mod na Among Us: Nkọwa zuru ezu
N'ikpeazụ! Codka jamhuuriyadda soomaaliyaGenshin Impact ọ ga-adaba na ndị na-achịkwa iOS!
Zingtụnanya! Nchịkọta nke Pokémon GO ọ fọrọ nke nta ruru 2 ijeri dollar
Usoro Buddy Pokémon GO: Ihe niile ị chọrọ ịma
Nchịkọta llema Aka na Pokémon GO: Kedu ihe ọ bụ na otu esi eji ya?
Arceus n'ime Pokémon GO: Ugbua na egwuregwu! Ma olee mgbe anyị ga-ahụ ya?
Zingtụnanya! Nchịkọta nke Pokémon GO ihe fọrọ nke nta ka ọ ruru ...
Ọnwa Mbụ 12, 2021
Ọnwa Mbụ 7, 2021
Nchịkọta llema Aka na Pokémon GO: Kedu ihe ọ bụ na otu ...
Ọnwa Mbụ 6, 2021
Na Mbụ	Osote 1 nke 21